Ukubuyekeza: Collamask. Uyini umbono wakho mayelana abathengi imaski nochwepheshe?
Nobuhle uhlale in fashion, futhi uzizwa omncane kakhulu kunawe limnandi. Kungenziwa kanjani lokhu kufinyelelwa uma kungekho isifiso, futhi ezanele ukufinyelela noma iyiphi izindlela esengeziwe? Kufanele sinake indlela ezifana Collamask. Ukusebenzisa it, kungamshintsha ukubukeka kwakho. Ngingathanda ukuba umuntu esemusha akagcinanga enhliziyweni. Pho-ke, ukuze akhohlise ubunjalo emshikashikeni walo ukubheka okuhle? Njengoba nokubuyekezwa, Collamask - ithuluzi ukuthi abantu abaningi isibe isixazululo. Indlela likhona, ngoba ubuhle umkhakha ochwepheshe bayasazi ukuphuthuma ngale nkinga futhi limatasa ekuthuthukiseni amathuluzi ungenza umphumela ngokuyisimangaliso.
Indlela yokwenza isikhumba bheka omncane
I Isifiso sokulondoloza intsha ngokuvamile yakhe sinamandla kakhulu kangangokuba abantu namanje unquma baphendukela ohlinzayo plastic. Aziyeki yokuthi imisebenzi enjalo esilimaza isimo uhlelo senhliziyo nemithambo yegazi. Phela, nabo basuke abazenzi ngaphansi izinzwa jikelele. Wonke umuntu ongashadile kungaba ukusabela komuntu ngamunye msebenzi. Futhi, sokuthola ukuhlinzwa kungaba isikhathi eside ngokwanele. Ngaphezu kwalokho, izenzo ezinjalo zigcwele izifo zesikhumba.
Kanti futhi, abantu abaphendukela ngamalungiselelo ehlukahlukene yezimonyo. Ngeshwa, awayona eziphansi. Futhi umphumela angeke esiboniswe kobubanzi ukukhangisa othenjisiwe. Kukhona amathuba ukuthi umphumela umthelela ukhilimu ngeke uvele eside. Futhi, awusebenzi ngaso sonke isikhathi ukwazi ukuthi aphephile ngoba umzimba iyonke. Kodwa, njengoba kufakazelwa ngempendulo, Collamask - ke isixazululo esingcono, ngoba kusho ayinangozi ngokuphelele.
Ukhululekile indlela yesimanje
Kusho "Kollamask" ikuvumela ukuba ubuyisele intsha futhi ukwenza kanjalo ngaphandle umonakalo empilweni. Ngaphezu kwalokho, uma usebenzisa i-ayisikhilimu akudingekile ukuvakashela beautician. Kufanele kuphela ukuthenga lokugoqa izindlela futhi ngokulandela imiyalelo kubangele izidakamizwa ebusweni. Kuyinto ngokwanele ukuba ngiphikisane naye ukubuyekezwa. Collamask uba imaski ngokuba ubuso bukaMose, ukuthi ubizwa wageza ngemuva kokusebenzisa. Kulokhu, umphumela uba ngempela kangako.
Okungukuthi, ungasebenzisa ukhilimu ekhaya. Manje awudingi ukuba uchithe isikhathi sakho ku-ke ukuya kudokotela onguchwepheshe. Kwanele bazinakekele izindlela evamile. Ngaphandle ukuthi esikhundleni ukhilimu evamile kumele kusetshenziswe "Kollamask".
Kuyini e imaskhi
Zonke izingxenye ayingxenye amathuluzi ziwusizo kakhulu futhi iphephile. Ngenhla imaskhi wasebenza iqembu ochwepheshe (ukuthi ixhasa ngokunamandla izimpendulo esibonga). Collamask evumela umnikazi ngamunye kutjho ukuthini ukuthembela engcono yi.
Ukhilimu kungenziwa bachazwa futhi ngalendlela:
Eziningana asebenzayo amino acid, umphumela okuyinto iqondiswe ngqó ukumiswa yokuguga. Futhi, lezi zingxenye kukhona ngokuvamile obangela rejuvenation okusheshayo.
Ngenxa sodium alganata kwenzeka nokuqedwa ubuthi epidermis. Uphiko akhishwa ulwelwe.
Ngenxa collagen isikhumba eshelelayo, ukuvuselelwa kwezicubu ezilimele wenziwa.
Ngenxa isenzo blue ubumba isikhumba ikhule ezimbotsheni zihlanzwa.
Nge Amagciwane uwoyela palmorozy ayafa, kuyilapho ejenti iyagcinwa nephunga elimnandi.
Ngenxa saturation isikhumba betaine nenzuzo trace izakhi, the imibimbi kuthiwa esehlelembe, futhi umswakama agcinwe.
Kuyinto ngenxa yezingxenye asebenzayo esingayilindela umkhiqizo yezimonyo kuyinto Imiphumela eyisimanga. Ungakhohlwa ukuthi Collamask imaski (impendulo - ubufakazi ezibukwayo) kudala umphumela ezingasetshenziswa awutholakali nganoma iyiphi enye indlela.
Kungani kufanele uthenge ukhilimu
Ukuzifihla ngokuyinhloko libhekene ezihlukahlukene zokusisebenzisa. Kusho ukwazi ukubhekana ngempumelelo nge imisebenzi ka:
ukususwa Kushesha kakhulu imibimbi.
Ekuvuseleleni, kuqabule futhi isikhumba ngcono.
Ukuhlanzwa ikhule ezimbotsheni.
Moistening futhi ubambe ubuningi ezidingekayo umswakama. Isikhumba alibe lisaba ezomile.
Toning, umuzwa lesikhumba esiwuhogelayo.
Ngokusobala, imiphumela ngempela eziphathekayo kwenza kube nokwenzeka ukuba sifinyelele Collamask. Impendulo evela kumakhasimende ezwakalisa injabulo ngenxa yokuthi kuphela eyindlela wagqoka esikhumbeni kufanele kube ukufeza umgomo.
Ukungabaza abathengi lanamuhla
Abantu abaningi bangase kufanele bakholwe ukuthi izithembiso ukukhangisa kuthiwa kungafaneleki. Nakuba ukhilimu Collamask (kobufakazi yangempela futhi uqinisekise ukuthi) has yonke imininingwane ebalulekile ukukhombisa ekulenzeni libe namandla. Onjiniyela kwaba ukwakha izindlela-ihlolwe ngempumelelo ngempela kamuva egunjini lokucwaninga esibhedlela.
Ukuze wenze okuvelayo akho imaskhi, udinga nje ukuyizama. Ngemva kwalokho, akungabazeki ukuthi ukhilimu iyasebenza, asihlali abathengi. Kunoma ikuphi, abampofu ithuluzi izinga akakwazi ukwenza yonke le misebenzi. Lezi izindawo zinikezwa Ukwakheka ingxenye zomuthi, lapho azikho nezivimbelakuvunda.
Okunye futhi okubaluleke ngokufanayo yokuthi akukho izindlela emakethe ukuba izindlela ezifana Collamask buso. Izibuyekezo kwamakhasimende ukuqinisekisa lokhu. Yokusebenzisa ezinye izidakamizwa, akunakwenzeka ukuba sifinyelele nomphumela ofanayo. Ngakho, kuba nokwenzeka ukuba akwazi ukunqoba izingqinamba imibimbi ekhona isikhumba. Futhi lokhu kuyinto enhle kakhulu bonke abanikazi izindlela, umphumela izuzwe uzinzile. Kulokhu, umonakalo umzimba akuzange kusetshenziswe.
Indlela yokusebenzisa i-ayisikhilimu
Sebenzisa ukhilimu ulula. Kodwa noma kunjalo, ngaphambi isicelo yayo kufanele emiyalelweni. Sebenzisa amathuluzi owadingayo kanje:
Sula isikhumba kusukela ukwakheka ezikhona nokungcola.
Sebenzisa ukhilimu kwesikhumba njengendlela buso.
imizuzu engu-20 ukuphuma esakhiweni ebusweni. Ngemva kwalokho-ke kungenziwa wageza off.
Asikho isidingo ukusebenzisa nsuku zonke izindlela ezifana Collamask buso. Izibuyekezo kwamakhasimende ukuqinisekisa ukuthi imvamisa elikhulu iyindlela yokusebenzisa izikhathi 2 ngesonto. Yilokho ngokwanele ukuze abone isikhumba sakhe sashintshwa ngokuphelele ngenyanga. Kuba eyayisencane kakhulu kunaye, obusuka impilo.
Abantu abaphethwe komzimba, futhi uthole izindlela. Lokhu kungenxa yokuthi uma isetshenziswa ukucasuka lalingekho nhlobo futhi ububomvu. Okungukuthi, noma yimuphi komzimba ayifakiwe uma usebenzisa amathuluzi.
Cream Collamask, izibuyekezo akhayo kakhulu, ungasebenzisa abantu zanoma iyiphi iminyaka nobulili. Ngenxa yalokho kokusebenzisa amathuluzi, azikho engemihle. Ngakho ungesabi ngoba impilo yabo noma ukusebenza evamile ezinye izinhlelo ezibalulekile. Lesi sikhungo kungekho contraindications. Futhi okokugcina, umuthi ngempumelelo kubantu nanoma uhlobo isikhumba. Lokhu lula kakhulu ukukhethwa amakhasimende ayo nge izintandokazi ezahlukene.
Lapho ukuthenga izindlela
Cream imaski Collamask, ukubuyekezwa lapho omuhle kakhulu, ukudayiswa kumawebhusayithi ahlukahlukene. Kodwa kungcono kakhulu ukuba bawathenge at umthombo olusemthethweni. Lokhu kuyosilonda ngokumelene imikhonyovu ukuthi bekwi ukuqaliswa izimali yekhwalithi ephansi ezicashe izimpahla tradable. Akufanele yini nomthelela yokungathembeki nomholo e inethiwekhi, wayala imikhiqizo ngezisetshenziswa ezingabazisayo.
Lapho wayala, ingosi engokomthetho ingozi olahlekile ngokuphelele. Ukuze oda umkhiqizo, kudingeka enze isibawo. Ngemva kwalokho, isisebenzi NAMEeshaya ukucacisa nemibandela oda. Ukwenza ukhilimu iza ezinsukwini ezimbalwa. Uma i-oda lakho ukulethwa ngalesi ukwehlukana okuvunyelwene inkampani yezokuthutha, iklayenti kungenziwa kuphela ukukhetha into phezulu.
Izibuyekezo abanikazi ukhilimu
Abathengi aveze yokuthi isikhumba ebusweni ngemva kokusebenzisa indlu ukhilimu iba kakhulu kunaye. Abaningi basikisela ukuthi ezibukwayo ngobudala ngemva kokusebenzisa indlu ukhilimu iminyaka 10.
Ukuze abesifazane ungowesilisa kubalulekile ukunaka. Kodwa emva kwenyanga ukusetshenziswa kwezimali wobulili obuhlukile onezinkolelo ezihlukile kuyinto eyayisencane kakhulu kunaye, ukuqala ukwenza izincomo ngaphezulu. Futhi konke lokhu sibonga izindlela Collamask. Ukwakheka, ukubuyekezwa, wonke amadokhumenti ingafundwa ngaphambi kokuthenga. Abathengi waphawula ukubonakala imiphumela yokuqala kakade emva 2 amaviki ukusetshenziswa kwezimali. Phawula futhi abathengi ukumelana umphumela we-ejenti. Lokho okwenzekayo ngesonto emva ukumisa ukusetshenziswa imibimbi ukubuyela. ngokuvamile Lokhu kwenzeka ngemva izinqubo kwenziwe salon ubuhle.
okubuyayo ezivela amadoda - abanikazi izindlela
Cream wayezazisa ubulili fair hhayi kuphela, kodwa futhi amadoda. Wonke umuntu ufuna ukubukeka emuhle. Futhi uma umsebenzi kudinga amadoda ukugcina intsha isikhathi eside, ngaphandle imikhiqizo yekhwalithi ukunakekelwa kwesikhumba abanakukwazi ukwenza.
Ukuze yabalingisi Ingaphandle kubaluleke kakhulu. Uma lona ukunakwa ngokwanele, uthola isikhathi esijana ukuba ikhiphe inani elincane izimonyo. Lokho, kusho "Kollamask" ikhambi elilungile yalabo msebenzi uhilela ngokunikeza izinkulumo zeningi.
Yini ochwepheshe bathi
Ngo emakethe yasekhaya hhayi kudala kwakukhona izidakamizwa ezifana Collamask. Izibuyekezo Ochwepheshe abonisa ukuthi imaskhi kufanelekile ekulweni izimpawu zokuqala isikhumba ukuguga. Lapho lokhu kwenzeka, hhayi nje imibimbi, kodwa futhi saturation dermis izinto ezidingekayo. beautician professional iklayenti ngamunye kufika kuye ngombono wokuba yelule ebusheni babo. Kusho "Kollamask" ikhambi.
Lokho ukugcina intsha kwesikhumba isikhathi eside ngenxa yeziteleka, kubalulekile ukuba banakekele khona amathuluzi eliphezulu. Izinto zesimanje emakethe igcwele izimonyo izipesheli. Isixazululo elilungile liphakathi ukulungisa Collamask, yini esingayifunda endleleni ukubuyekezwa amakhasimende sibonge.
Kenzo Amakha emhlabeni amakha
I-Eye Mask ekhaya: iyiphi iresiphi yokukhetha?
Pop Ushintsho olungcono Art: izeluleko isinyathelo ngesinyathelo imiyalelo
Indlela yokwenza izimonyo ukukhanya we-Halloween ngezandla zakhe. Fancy ukwakheka imibono
Indlela yokwenza magciwane ephephile kodwa eziphumelelayo kakhulu, usebenzisa 2 isithako kuphela
Markakol - Lake East Kazakhstan: incazelo. Izinsiza Amanzi Kazakhstan
Uchungechunge trophic: umdwebo isici nezimfunda. Eziwukudla emathafeni ase
Ayzek Azimov: Imithetho ezintathu wamarobhothi
Ukufunda - wukuthi enqubeni? Kuyini Ukufunda etemibhalo
Biography Sergeya Dovlatova kanye nomsebenzi wakhe
Yini engingayenza ukuze ngigcine ukuxoshwa kwami?
Ukuhlaziywa komlobi kaMayakovsky "Isimo Esihle Ngamahhashi": isakhiwo, umqondo, isihloko somsebenzi
Ubisi mushroom: inzuzo kanye nokulimala - yini enye?
Kuyini igazi ukubalwa
Uba kanjani bili, futhi aqale ukwenza okuhle